China HSS oghere hụrụ, ígwè oghere hụrụ, metal oghere hụrụ, elu mma HSS elu na-agba ígwè malite ịgba bit, igwe anaghị agba nchara oghere hụrụ ụlọ ọrụ na-emepụta | Boda
HSS oghere hụrụ, ígwè oghere hụrụ, metal oghere hụrụ, elu mma HSS elu na-agba ígwè malite ịgba bit, igwe anaghị agba nchara oghere hụrụ
BOSENDA HSS Oghere nkwọ / HSS Oghere Opener na-eyi nguzogide siri ike na-arụ ọrụ, ya na mma ya dị nkọ, ezigbo nfe na ọrụ dị mfe. A haziri BOSENDA HSS Hole Saw maka ndị enyi na enyi.
N'oge na-arụ ọrụ usoro, na-egbusi ezé na obere vibration nke nwere ike n'ụzọ dị irè na-eme ka a itule mgbe egwu oghere na stables ọrụ. Ọhụrụ imewe nke mgbawa mwepụ uzo nwere ike ime ka ígwè scraps ngwa ngwa wepụrụ na-eme ka ọrụ ndị ọzọ ezigbo.The egweri center akuakuzinwo, nke n'ọnọdu ihe n'ụzọ ziri ezi, na-egbusi utịp, ndị a niile na-eme ya a oru-azọpụta n'oge na-arụ ọrụ process.The triangle njikwa nwere ike igbochi mmịfe.
HSS Oghere ịwa nkume nwere ike na-arụ ọrụ dị ka aluminom onu ​​ire, metal efere oghere hụrụ, isiike plastic ígwè oghere hụrụ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-adaba adaba. efere ígwè, SMD iron plate, ibo ụzọ aluminom, mpempe akwụkwọ ígwè, alloy aluminom, ngwongwo na-abụghị nke ọkọlọtọ, oghere nile nke ọkpọkọ na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ igwe.
The HSS oghere nkwọ / HSS malite ịgba nwere hexagonal ahụ imewe, 12-100 mm nwere ike ahaziri, akụkụ nke eze nha nha bụ igweri site ọgụgụ isi indexing nke CNC igwe ngwá ọrụ; ozugbo etolite, onu ogugu ndi mmadu di nkọ na nkenke di elu; mgbe agụụ okpomọkụ ọgwụgwọ, na ike na ekweghị ekwe nke ndị opener izute dị nnọọ mma na-arụ ọrụ chọrọ.
HSS Oghere Saw na-eji na bench malite ịgba, egbe dakpuo, stereo electric malite ịgba na lathe ígwè.
N'oge arụ ọrụ, ịgbakwunye mmiri ma ọ bụ mmiri oyi ga-eme ka ọrụ ahụ dịkwuo mma ma ka mma yana ịgbatị ndụ ngwaahịa ahụ. Mgbe etinyere oghere ahụ n'ime olulu ahụ, ihu atọ nke ihe kwekọrọ na ya ga-adaba adaba na ngwaọrụ ike. N'ime usoro ọrụ, ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ mwepụ mgbawa adịghị mma, kwusi ọrụ ahụ na mbụ, wepu mkpofu ahihia wee gaa n'ihu na-arụ ọrụ ọzọ.
BOSENDA HSS Oghere Nkwọ nha dị ka n'okpuru:
12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 18.5mm, 19mm, 20mm, 20.5mm, 21mm, 21.5mm, 22mm, 22.5mm, 23mm, 24mm, 25mm, 25.5mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm , 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 42mm, 45mm, 48mm, 50mm, 53mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm, 23.5mm, 19.5mm, Center malite ịgba na 5 * 40 (pụrụ iche maka 12-32MM), na mgbatị etiti 6 * 40 (pụrụ iche maka 35-100mm).
Nke gara aga: Granite oghere hụrụ, sintered marble oghere hụrụ, nkume oghere hụrụ, diamond alloy cutter isi, oghere hụrụ, mabul nkpuchi, ihe dakpuo
Osote: TCT onu hụrụ, oghere malite ịgba, ígwè ígwè oghere hụrụ, sikwuo carbide malite ịgba, UNIKA igwe anaghị agba nchara alloy oghere hụrụ
Diamond iko seramiiki hụrụ, iko malite ịgba, iko hol ...